प्रहरी–विप्लव समूहबीच झडप प्रहरी , जवान र विप्लवका जिल्ला इन्चार्जको मृत्यु | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
प्रहरी–विप्लव समूहबीच झडप प्रहरी , जवान र विप्लवका जिल्ला इन्चार्जको मृत्यु
प्रतिबन्धित विप्लव समूहका जिल्ला नेता र प्रहरीबीच भोजपुरमा गोली हानाहान हुँदा प्रहरीसहित २ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा विप्लव समूहका ओखलढुङ्गा जिल्ला इन्चार्ज नीरकुमार राई र प्रहरी जवान सञ्जिव राई छन् । भोजपुर जिल्लाको शनिबारे भन्ने स्थानमा रहेका पानधारे होटलमा भएको उक्त घटनामा अर्का प्रहरी जवान खोमनाथ भट्टराई घाइते छन् ।
म भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आले । बुधबार विहान ८ः४५ बजे भोजपुर नगरपालिका ७ हटियालाइनको पानधारे होटलमा विप्लवका कार्यकर्ता नीरकुमार बसिरहेका थिए । सञ्जोग नै भन्नुपर्छ त्यहीबेला चिया खान सादा पोशाकका प्रहरी सञ्जीव राई पनि होटलमा पुगे । प्रत्यक्षदर्शीका मलाई भने अनुसार उनीहरूबीच पहिल्यै चिनजान समेत थियो ।
त्यही क्रममा उनीहरूबीच कुराकानी सुरु भयो । कुराकानीकै क्रममा हतियारको कुरा निस्कियो र विवाद बढ्दै जाँदा चर्काचर्की भयो । त्यसपछि उनीहरूबीच केहीबेर लछापछार र ठेलमठेल पनि चल्यो ।
जिल्लाका पत्रकार बुद्ध तामाङका अनुसार गत जेठ ७ गते प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका विप्लव समूहका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएपछि विप्लव समूहले आफ्ना गतिविधि बढाएको थियो । त्यस्तै प्रहरी प्रशासनले पनि विप्लव समूहमाथि आफ्नो निगरानी र सुरक्षा सर्तकता थप बढाएको थियो ।
जेठ सातमा भोजपुरको धोद्रे जङ्गलमा दुबैपक्षबाट गोली हानाहान भएपछि प्रहरीको गोली लागेर षडानन्द नगरपालिका २ का ३२ वर्षीय तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएको थियो । तर, विप्लव समूहले आफ्ना कार्यकर्ता घिमिरेको भिडन्त नभई हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
भोजपुरमा भएको यो घटनाबारे बुधबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि कुरा उठेको छ । काँग्रेस सांसद डा. डीला संग्रौला पन्तले भोजपुर घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । ‘यो संवेदनशील विषय हो । सुरक्षा व्यवस्था के भइरहेको छ ? भोजपुरमा भिडन्त भयो र मान्छेको मृत्यु भएको छ, वास्तविकता के हो ?’ सांसद पन्तको प्रश्न छ ।
कंग्रेस–राजपा गठवन्धन बन्ने
पाँच पटकको विश्व विजेता अस्ट्रेलियालाई हराउँदै इंग्ल्यान्ड २७ वर्षपछि फाइनलमा